FAQs - Yiwu Yiyun Clothing Co, Ltd.
Ndeipi basa uye bhizinesi chiyero che Yiwu Yiyun Clothing Co, Ltd.?
Kambani yedu inotarisa pakuyambuka miganhu uye kutengeswa kwepasirese uye zvakajairwa zvigadzirwa, ichipa masevhisi akadai sekupewa nzvimbo, kuwonekera kwechigadzirwa chekutakura, kunyora mavara, logo uye kudhirowa zvakajairika zvemhando yezvigadzirwa, ukuru uye ruvara, pamwe nemabasa ekutumira kunze kwenyika.
Unhu hwezvigadzirwa zvako huri sei? Uye nderupi rudzi rwevimbiso runogona kupihwa kune vatengi vanoyambuka miganhu?
Hunhu hwezvigadzirwa zvedu zvakave zvakapetwa kwemakore gumi nemaviri sezvo zvigadzirwa zvedu zvakanangana nemusika wepasi rese nezvigadzirwa zvemhando yepamusoro uye sevhisi sechiratidzo chedu. Zvakare, isu tinopa zvigadzirwa zvine huwandu hwakawanda hwemitengo kuti zvisanganiswe nezvinodiwa zvemisika dzakasiyana pasi rese. Naizvozvo, mhando yezvigadzirwa inogona kuvimbiswa ne-mushure-yekutengesa sevhisi yenguva isina muganho yakapihwa.
Chigadzirwa chako chakawanikwa chakagadzikana here?
Isu takagadzira ketani yakagadzikana yekugovera, neye zvigadzirwa zvekutsvaga inokoshesa kusvika kuRMB mamirioni gumi, inoenderera uye inokurumidza kuendesa cheni.
Ndeipi chiyero chekukura kusiri pamutemo kwekambani yako?
Kambani yedu ine zvitoro zviviri mu Yiwu International Wholesale Market, Zhejiang. Isu zvakare takamisa hofisi yedu muWorld-Wide House, uye zvigadzirwa zvekugadzira mu Jiangsu uye Guangzhou. Tigashire shamwari dzinobva kumativi ese epasi kuuya kuzoshanya nekutenga zvigadzirwa zvedu.